TAARIIKH: Martin Vrijland
Friesland, luuqadeeda iyo dhaqankooda ayaa loo isticmaalay jasiirad ka hooseysa Iceland oo loo yaqaan Frisland?
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 7 January 2017	• 7 Comments
Sida dhakhsaha leh ee taariikhda la been abuuri karo waxay u muuqataa in la caddeeyo helitaanka jasiiradda Frisland ee khariidada qadiimiga ah oo si fudud u muuqda in ay ku jiraan maktabadaha caalamiga ah. Weligaa ma yaabin sida ay suurtogal u tahay in ay jiraan dad aad u yaryar oo ku nool waqooyiga Netherlands oo ku hadlaya luqad [...]
Donald Trump iyo Hillary Clinton labadoodaba Fircoon farcan
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 18 May 2016	• 33 Comments
Qoraaladayda ugu dambeysa ee aan ku soo sheegnay marar badan, oo ah in dunidu wali ku socoto qoryaha qubeyska hore ee Firfircoonida. Waxaa laga yaabaa in aad ka fekereyso "Ah, sidee baad u samaynaysaa nin aad u mashquulsan!", Laakiin waa waxbarasho aad u qiimo badan, maxaa yeelay markaa waxaad fahmi doontaa sida taariikhda, xaadirka iyo mustaqbalka [...]
Brexit ma ahan mid u xun wadnaha dhaqaalaha Ingiriiska
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 14 May 2016	• 3 Comments
Shalay waxaanu ku aragnaa wararka NOS ee ah in Brexit (taas oo ah ka soo baxa Yurub ee Britishka) ay lahaan karaan cawaaqib xun oo dhaqaale ee wadnaha dhaqaalaha ee London. Si kastaba ha noqotee, taasi waa dhameystir macno leh haddii aan si halis ah uga shaqeyn karno si aan u baarno waxa saxda ah ee dhaqaalaha London. Tani [...]
Dagaalkii Suuriya iyo dagaalkii dunida ee soo socda ama 'gaasaska'
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 10 May 2016
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa shalay ku dhawaaqay in la dhisi doono hay'ad caalami ah oo la dagaallama argagixisannimada. Su'aashu waxay tahay haddii aan ka soo baxno arrintan in Putin (ama Putin, haddii aad jeclaan lahayd) dhab ahaantii taageeraan ajandaha caalamiga ah ee Amarka New World. Si aad uga jawaabto su'aashaas waxay noqon kartaa [...]
Munaasabada Maalinta Xorriyadda Ma taqaanaa waxa aad u dabbaaldegeyso?
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 5 May 2016	• 0 Comments
Haddii aad u dabbaaldegayso Maalinta Xorriyadda ee maanta iyo aad u maleyneyso inaad u dabbaal-degayso xoreynta Nederland ee Nazis, ka dibna qaado waqti aad ku barato inay taasi dhab ahaantii tahay. On the website Truthseeker1313.com aragti gebi ahaanba ka duwan taariikhda waxaa laga heli karaa marka loo eego in [...]
Martin Vrijland ayaa wareysiiyay Sean Hross oo ku saabsan sida ay udub dhexaad u yihiin caalamka
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 31 Maarso 2016	• 18 Comments
Wareysi uu siiyay Martin Vrijland oo Sean Hross on 31 March 2016 arrimaha muhiimka ah ayaa laga wada hadlay. Sean Hross waa taariikhyahan oo asal ahaan kasoo jeeda Koonfur Afrika. Horaanba waan wareysiiyay 25 May 2015. Warbixinta Sean waa lagama maarmaan in la fahmo wax kasta oo aan maanta sameyno [...]
Sababta oo ah Yurub waxay u egtahay in Erdogan uu yahay mid aan habooneyn, laakiin si qarsoodi ah ayuu ula shaqeynayaa Hitler cusub
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 11 Maarso 2016	• 4 Comments
Ka hor dagaalkii labaad ee adduunka, waxaan soo aragnay dib u soo nooleenta wayn ee dhaqaalaha Jarmalka. Adolf Hitler waxay dhiseen warshado dhameystiran oo kaabayaashu si aad ah ayey u fiicnaadeen. Tani abuuray kabashada dhaqaalaha weyn ee Germany, taas oo ilaa markaas soo gaaray magdhaw culus ka dib dagaalkii koowaad ee aduunka. Xaaladda dhaqaale ee laga yaabo in laga yaabo inay Adolf Hitler ka dhigto [...]
Miyuu ahaa farcankiisii ​​Fircoon. Bal waa ayo boqorradii reer Falastiin?
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 11 Maarso 2016	• 6 Comments
Taariikhda ma'aha sida saxda ah? Miyay diimaha ka yihiin sida aan u ogaanno saxnaanta saxda ah ee asalkooda? Maxay Queen Elizabeth II oo reer Great Britian ah lagu koray carshi ku yaal buurta dusheeda Yacquub iyo dusha sare ee jaranjariga qaabka muuska? Ka hor inta aanan dhameystirin falanqaynta [...]
Dadkii reer Dutch waxay heleen iskutallaabtana leh calaamad Nazi ah?
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 10 Maarso 2016	• 6 Comments
The "Order of Merit Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Germany (German: Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) waa Order kaliya ee Merit ee Germany oo ahaa on 7 1951 September dhigay by Madaxweynaha Federaalka Theodor Heuss. Waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan iskutallaabta. Waxaa la siiyay in ka badan halkii caan ah Nederland. Just liiska: Queen Juliana iyo Prince Bernhard, Queen Beatrix oo [...]
Xaaladda dagaalka ee Suuriya; Boqortooyada Boqortooyada Midowday, Byzantium iyo Boqortooyada Ciraaq
Filed in TAARIIKH	by Martin Vrijland	on 7 Maarso 2016	• 0 Comments
In la fahmo ah ee Turkey uu hogaaminayo Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan waxaa muhiim ah in la baaro goosin ka mid ah taariikhda. Haddii aan ogaado taariikhda this, waxaan u garan sida dagaal ee hadda ka jirta Syria lagu macnayn karaa, kuwaas oo kooxuhu yihiin kuwo firfircoon oo 'cidda' ama 'waxa' ah [...]
Guud ahaan Wadarta: 13.795.670